Kafe Na Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ
Fraịdee 8 Julaị 2022
Kafe Na Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ E si na steeti US na ebe a na-ese anwụrụ ọkụ si na steeti ahụ wee nweta ya, ya na ndị otu nyocha nke mbụ, ndị ọrụ nyocha ahụ kpebiri iji osisi na akpụkpọ anụ nwere agba gbara ọchịchịrị dịka ojii na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, tinyere ọla edo na rose. Ewere ọla edo jiri ọkụ na-ekpo ọkụ ma dị ọkụ mara mma. Ihe omuma nke imewe a bu nnukwu cha cha nke 6 nke kwụsịtụrụ nke mejuputara 1200 ejiri aka eme anodized steel. Ihe mkpuchi mgbochi nke mita 9, nke mkpuchi mkpuchi nke 275 centimita kpuchie nke nwere karama mara mma ma dị iche iche, na-enweghị ihe mkpuchi ọ bụla na-ekpuchi ihe mgbochi mmanya.
Tọọzdee 7 Julaị 2022
Ọkà Okwu Sperso sitere na okwu abụọ Sperm na ụda. Particulardị otu iko ahụ na-ekwu okwu na ya na -ekwu okwu n'ime olulu ya n'isi na-ezo aka n'echiche nke ịdị ọcha na ntopute nke ụda gburugburu gburugburu dịka ọkụ nwoke na-abanye na akwa nke nwanyi n'oge ị na-eto. Ebumnuche bụ imepụta ike dị elu na ụda dị elu gburugburu gburugburu. Ọ bụ sistemụ ikuku na-enyere onye ọrụ aka ijikọ ekwentị ha, laptọọpụ, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ na onye na-ekwu okwu site na Bluetooth. Enwere ike iji ụlọ a na-ekwu okwu n'elu ụlọ, ime ụlọ na ime ụlọ TV.
Ihe Omumu Banyere Ihe Omuma Ya Na Mmepe Ya
Wenezdee 6 Julaị 2022
Ihe Omumu Banyere Ihe Omuma Ya Na Mmepe Ya Ihe owuwu ulo a bu nke Teknụzụ Teknụzụ nwere ntụzi aka nke nchịkọta ihe owuwu ahụ na gburugburu ya, oghere dị jụụ ma dịkwa mma. Ezi echiche a na - eme ka nnabata a bụrụ akara ala, mebiere aka na nyocha nke ọgụgụ isi nke ndị nyocha ga - eme ya, ekwuputara ya na ebumpụta ụwa ya. Ihe atụ dị iche iche a ma ama nke ime ụlọ ahụ dị na concave na convex na –eme ka ihe emetụtaghị mbara ala na-akọwapụta ya, njirimara bụ isi nke ụkpụrụ ụlọ.
Tiuzdee 5 Julaị 2022
Stool Etere osisi Ene nwere osisi siri ike nke na-apụta ka ọ na-ese n’elu, n’onweghị ya n’ụkwụ osisi, n’elu osisi nchara. Onye rụrụ ya kwuru na oche ahụ, nke ejiri aka ya wee rụọ osisi enyi, kwadoo ya site na iji otu akụkụ nke otu osisi ahụ wee dozie ma rụọ ọrụ n'ụzọ siri ike. Mgbe ị na-anọdụ ala na oche bido, ntakịrị ịrị elu nke dị n'akụkụ azụ na azụta akụkụ dị n'akụkụ n'akụkụ na-agwụ n'ụzọ ọ ga-eweta ọnọdụ ịnọ n'ọnọdụ dị mma. Stgbọ elu Ane nwere nnennen ọkwa dị mgbagwoju anya iji mepụta ọmarịcha ihe.
Ngwugwu Maka Tii
Mọnde 4 Julaị 2022
Ngwugwu Maka Tii Tea Hall Brand, were ihe osise nke ịkwafu ma wụsa shaa n’efu na oge ezumike, echiche nke usoro ị teaụ tii, sie ike ma ọ bụ nke na-adịghị ike, na-agbanwe n’ụzọ a na-atụghị anya ya, ka ọ dị n’isi tii mgbe ị na-a teaụ tii. Charm takingụ tii dị ka ink dee ya na mkpịsị mkpịsị mkpịsị akwụkwọ ya, na-ese ihe na-eme ka mmadụ nwee ezinụ ụlọ ebe a na-anọkarị tii na-eme ihe. Ihe ngosiputa ngwugwu izizi na-egosiputa ọnọdụ ikuku, na-egosipụta oge obi ụtọ nke ibi ndụ na tii.
Mbọsị Ụka 3 Julaị 2022
Nkwado Ahia Project Yellow bụ ihe osise zuru oke nke na-ewulite echiche a na-ahụ anya nke Ihe niile bụ Yellow. Dabere na ọhụụ isi, a ga-eme ngosipụta ndị dị n'èzí n'obodo dị iche iche, a ga-emepụta usoro ọdịbendị na nke okike n'otu oge. Dị ka IP na-ahụ anya, Project Yellow nwere ọhụụ na-akpali akpali na atụmatụ ụcha dị ukwuu iji mepụta ọhụụ igodo nke jikọtara ọnụ, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara ichefu. Kwesịrị ekwesị maka nkwalite ntanetị buru ibu na ntanetị na ntanetị, yana nsonaazụ nke ihe ndị a na-ahụ anya, ọ bụ ọrụ nrụpụta pụrụ iche.
Kafe Na Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Ọkà Okwu Ihe Omumu Banyere Ihe Omuma Ya Na Mmepe Ya Stool Ngwugwu Maka Tii Nkwado Ahia